Cognos Analytics Kwidziridza Fekitori - Motio
musha 9 Services 9 Cognos Analytics Kwidziridza Fekitori
Blogs & Nyaya Dzedzidzo
Iyo Inosimudzira Fekitori
Simudzira Cognos Analytics
Neanopfuura makore makumi maviri echiitiko, timu yedu yepasi rose inogona kukubatsira kugadzira yako Cognos Analytics yekusimudzira purojekiti uye kudhirowa hurongwa. Panguva yekugadzirira, isu:
ZOngorora Yako Yazvino Cognos Nharaunda
ZNarrow The Makuriro
ZKwayedza Uye Validate
Yedu software tekinoroji inoita kuti tideredze mutengo uye nguva inosvika makumi mashanu muzana kana ichienzaniswa nemanyorero maitiro.
Iyo yekuchinja nzira yekuramba uine yega uye yega nyowani yeCognos vhezheni uye kuenzanisa rako bhizinesi neIBM yakajairika kuburitsa zano.
Taura zvakanaka kune iro risingatsigirwe vhezheni yeCognos, rega kunzvenga iyo yekuvandudza, uye uti kwaziwai Iyo Inosimudzira Fekitori!
ZKwikwidza pane analytics
ZSimudzira nekukurumidza & zvakanaka
ZShandisa zvazvino kugona & maficha
ZMinimize lagging & nhaka masisitimu
ZBvisa zvinonetsa mabasa & mapurojekiti
ZIta mabasa ezuva nezuva
3Blogs & Nyaya Dzedzidzo
Verenga iro rakabudirira vatengi vawana neCognos Upgrade Fekitori!
Ona zvinotaurwa nevamwe vedu vatengi…
Kushandisa kwedu kuongororwa kwemanyorero kwakamhanyisa yedu nguva yeprojekti ne91%
“Tine chivimbo nenzira yekuenderana neCognos kukwidziridzwa ne Motio.
Kuenda ku (itsva CA shanduro) zvichatitorera vhiki pane mwedzi. ”
Muongorori weBI, Nyika yeNorth Dakota
kushandisa Motio yakadonhedza yedu yekukwiridzira nguva ne60%
"Kukwidziridzwa kubva kuCognos 8.4.1 kusvika 10.1.0 kwakatora mwedzi mitanhatu uye yaive nzira inorwadza chaizvo. Kurumidza kuenda ku Motio kuuya kweCognos yedu 10.2.2 kusvika 11.1.6 kusimudzira. Shanduko yacho yakatora mwedzi miviri, kuita kwavo kwakarongeka maitiro nemabasa akafanana. ”
Enterprise Architect, Orlando Utility Commission
Svika Kunze Kune Iyo Motio Nyanzvi